Football Khabar » कोउटिन्हो बेचेर ‘नयाँ फरवार्ड’ भित्र्याउने बार्सा बोर्डको योजना : को हुन् उनी ?
कोउटिन्हो बेचेर ‘नयाँ फरवार्ड’ भित्र्याउने बार्सा बोर्डको योजना : को हुन् उनी ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले लोनमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख पुगेका आफ्ना ब्राजिलियन खेलाडी फिलिपे कोउटिन्होलाई स्थायी रूपमै बेच्ने योजना बनाएको रिपोर्ट बाहिरिएको छ । नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिन कोउटिन्होलाई बार्यनबाट फर्काएर टोलीको हिस्सा बनाउन इच्छुक रहे पनि बोर्डले भने फरक योजना बनाएको हो ।
बार्सिलोना निकट पत्रिका ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार क्लबले ब्राजिलका स्टार खेलाडीलाई क्याम्प नोउबाट बिदा गरेर युवा फरवार्ड भित्र्याउन कसरत थालेको छ । र, त्यसका लागि बार्सिलोनाले सहज अवस्थामा भित्र्याउन सकिने खेलाडीका रूपमा इंग्लिस क्लब एभर्टनका ब्राजिलियन युवा फरवार्ड रिचार्लिसनलाई पछिल्लोपटक प्रमुख योजनामा राखेको चर्चा सुरु भएको छ ।
इंग्लिस मिडिया रिपोर्टअनुसार बार्सिलोना २२ वर्षीय खेलाडीका लागि ८५ मिलियन पाउन्डसम्म खर्चिन तयार छ । स्पेनका अन्य मिडियाले पनि बार्सिलोना कोउटिन्होलाई बार्यनबाट समरमा फर्काउने पक्षमा नरहेको र नयाँ फरवार्डको खोजी तीव्र रूपले गरिरहेको खबर छ ।
बार्सिलोनाले कोउटिन्होलाई गत समर सिजनमा एकवर्षे लोन अवधिका लागि बार्यन पठाएको हो । बार्यनले यो सिजन सकिएपछि १२० मिलियन युरोमा कोउटिन्होलाई स्थायी रूपमा खरिद गर्न पाउने विकल्प छ । तर, बार्यन कोउटिन्होलाई खरिद गर्ने पक्षमा नरहेको चर्चा छ ।
प्रकाशित मिति १६ माघ २०७६, बिहीबार २०:५२